Archive du 20190711
Fifidianana ben’ny tanàna Mametraka fepetra hentitra ny TIM
Miantso ny mpikatroka manerana ny Nosy hiakatra eto Antananarivo ny antoko Tiako I Madagasikara na ny TIM ny 12-13 jolay izao
Heriniaina Razafindrakoto « Manana ny traikefany ny depiote TIM. »
Iny no fanapahan-kevitry ny HCC na nitsotra aza ny CENI hoe be ny tsy fahatomombanana, hoy ny mpanao politika, Heriniaina Razafindrakoto,
Distrikan’Ambositra « Maika ny volavolan-dalàna momba ny tantsaha »
Teo amin’ny andraikitry ny fahefana mpanatanteraka ny tenanay teo aloha, hoy ny depiote vaovao voafidy ao amin’ny distrikan’Ambositra, Marie Monique Rasoazananera, ary ankehitriny dia mandray ny toeran’ny fahefana mpanao lalàna.
Siteny Randrianasoloniaiko “Tsy maintsy henoina ny hevitry ny hafa”
Na dia manana ny maro an’isa aza ny Ird eny amin’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza dia nambaran’ny depiote Siteny
Antoko politika VAMI Tokony hosaziana ireo depiote nivadika
Tsy mbola nandray ny asany akory ireo solombavambahoaka tsy miankina voafidy tamin’ny anaran’ny tenany, dia efa nivadika sahady ary nanohana ny fitondrana.
Antoko mpanohitra mijoro ara-dalàna Arirariran’ny fanjakana
Eny amin’ny antenimieram-pirenena Lapan’ny demokrasia no tena hahafahana milaza ny tsy mety.
Baolina kitra, mampientam-po Baolina kitra, mampiray ihany koa Barea Malagasy, tohanantsika hatramin'ny farany Tsy maintsy mandresy no anarany.
Fanadiovana ny haino aman-jery manerana ny nosy Afaka 10 andro ny vokatry ny fanadihadiana
Miisa 180 hatramin’ny omaly ireo onjam-peo sy fahitalavitra tonga nanao fanambarana momba ny antontan-taratasy eo am-pelatanan’izy ireo, teny anivon’ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina.
Manao antso avo ny Jirama Aoka mba tsy hampiasa fitaovana mahery vaika anio alina
Efa miomana fatratra amin’ny fiatrehana ny lalao baolina kitra hifanandrinan’ny ekipam-pirenena Barea amin’i Tunisie indray anio alakamisy alina ny rehetra.
Ampahefa-dalan’ny CAN 2019 Handrakotra ny renivohitra anio alina ny polisy 1350
Ho fitandroana ny filaminana sy ny fandriampahalemana, hidina an-dalambe ny polisim-pirenena anio alina.
Lalao goavana anio Harapaky ny Barea koa i Tonizia…
Ora sisa isaina dia ho raikitra ny fifanandrinan’ny Barean’i Madagasikara amin’ny Eagles de Carthage Tonizianina manomboka amin’ny 10 ora alina,
Nicolas Dupuis Mbola ho mpanazatra ny Barea aorian’ny CAN
Mitohy ny dia ho an’i Nicolas Dupuis sy ny ekipam-pirenena Malagasy. Hotazonina ho mpanazatra an’ny Barean’i Madagasikara hatrany ny tenany aorian’ny CAN.
Minisitra Tinoka Roberto sy ny JIOI 2019 Nanara-maso ifotony ny fampivondronana teny an-kianja
Rehefa avy nanotrona ny ekipan’ny BAREA tany Egypta tamin’ireo lalao efa nataony tamin’ny CAN 2019 ny Minisitry ny tanora sy fanatanjahatena, Atoa Tinoka Roberto.
Ligin’ny baolina kitra any Bongolava Lany ho filoha Rakotonirina Mamonjisoa
Ireo mpikambana 3 mianadahy ao amin’ny « Comité de Normalisation FMF » : Atallah Beatrice filoha sy Andriatinarivelo José filoha lefitra ary Benony
Whabi Khazri Mila arahan’ny vodilaharan’ny Barea maso akaiky
Raha mijery ny filalaon’ny ekipam-pirenena tonizianin’ny baolina kitra, indrindra, nanoloana ny Black Star ganeanina,
Robert Randrianatoandro sy ny Barea Tsy tokony hitsahana ny maha firenena antsika
Naneho ny firaisan'ny Hasim-piandrianana misy rehetra dia ny an'ny tany sy ny fanjakana ary ny vahoaka ny zava-misy ankehitriny noho ny fahatomombanan'ny lalaon'ny ekipam-pirenena Malagasin’ny baolina kitra any Egypta.
Edito Miaritra kely !
« Izay mahari-pery no izy. Izay miaritra ihany no tafa. Miaritra no tompondaka.
Toby famatsian-drano Amoronankona Ho vita amin`ny volana aogositra ny asa
Nitsidika ny toerana anorenana toby famatsian-drano madio teny Amoronankona, manamorona ny lalana « By-Pass », omaly ny Sekretera jeneralin’ny governemanta,
Fahavitan-tena ara-tsakafo Efa afaka mamantatra mialoha ny mety ho toetry ny andro ny tantsaha
Anisan’ny fosotra mbola tsy hahafahantsika eto Madagasikara mamokatra tsara ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Noho ny CAN 2019 Mandeha tsara ny varotra “écran plat”
Nahitana fiovana tanteraka ny varotra fahitalavitra teto amintsika hatramin’ny niantombohan’ny lalao CAN 2019 nandraisan’ny ekipam-pirenena Barea anjara. Mahalafo “écran plat”
Lalàna mifehy ny harena an-kibon` ny tany Nankatoavin` ny HCC ny fanitsiana azy
Efa tamin` ny taona 1999 no nisy io lalàna io saingy tsy mifanaraka amin` ny vanim-potoana ankehitriny.
Halatra omby Manampahefana maro voasaringotra amin’ny taratasy famotsiana
Efa hatramin’ny volana jona no nokarohina ireo dahalo dimy lahy.
Fahafatesana Depiote Olon’ny fihavanana, antra ireo sahirana i Jaona Elite
« Mila iverenana ny tantara. Fony mbola nitambatra ny MAPAR na miaraka amin’ny Andry Rajoelina sy ny GPS dia nampiombona tanteraka ny teo Tsimbazaza i Jaona Elite izay maty ny alahady teo.